Markab dagaal oo Spain leedahay oo burburshay dooni burcadbadeed - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMarkab dagaal oo Spain leedahay oo burburshay dooni burcadbadeed
October 30, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Doonida oo gubaneysa kadib markii la burburshay. [Xigashada Sawirka: EUNAVFOR]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Markab dagaal oo Spain leedahay oo katirsan ciidamada badda ee Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa burburshay dooni burcadbadeed, sida wasaaradda arrimaha dibada Spain ay bayaan ku sheegtay Isniintii.
Kuma aysan cadayn bayaankeeda haddii ay jiraan burcadbadeed dooni saarnayd.
Bishaan gudaheeda, Ilaalo ammaanka ah oo saarnaa markab xamuulka qaada oo ku gooshayay calanka Hong Kong ayaa iska difaacay weerar ay ku qaadeen burcadbadeed oo ka dhacay xeebta Soomaaliya. Wuxuu ahaa isku-daygii labaad oo burcadbadeeda Soomaaliya ku damcaan in ay ku qabsadaan markab ganacsi sanadkan gudihiisa.
October 20, 2018 Markab iska difaacay weerar ay burcadbadeed ku qaadeen xeebaha Soomaaliya
November 28, 2019 Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo qaabilay maalgashadayaal ka socda Shiinaha
Ciidamada booliiska Garoowe oo qabtay labo nin oo looga shaki qabo in ay ka dambeeyeen dil ka dhacay magaalada
Garoowe-(Puntland Mirror) Warshad samaysa tuubooyinka ayaa maanta oo Talaado ah laga furay magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland. Abshir Cabdullaahi Diiriye oo kamid ah masuliyiinta shirkada ayaa sheegay in ay soo saari doonto tuubooyinka caaga ah [...]